Steam Deck yakafanana nePC uye Windows inogona kuiswa | Linux Vakapindwa muropa
Steam Deck yakafanana nePC uye Windows inogona kuiswa kuti ive Xbox inotakurika
Pablinux | | Linux vs Windows, Noticias
Pave kungori pasi pe 24 maawa kubva Valve Yakazivisa su Steam dhizaini. Pakutanga, iri inotakurika koni iyo yatinogona kuwana yedu Steam katalog, asi kuverenga zvishoma zvakanyatsojeka tinoona kuti inoshandisa yakakosha SteamOS system iyo yakavakirwa paArch Linux neKDE. Kana tikaverenga zvishoma zvakanyatsonaka, se tsanangura KuVerge, kudaidza chishandiso ichi kuti "koni" hachisi chokwadi.
Pepa, iyo Steam Deck iri inotakurika koni, iwe unofanirwa kungoitarisa kuti uzive icho. Asi izvo zviri mukati chaimo PC, saka mamwe masisitimu anoshanda uye software zvinogona kuiswa. Mukushaikwa kwekuyedza iyo yakakosha SteamOS uye kubva kune izvo zvinotaurwa naValve, unogona kuisa emulators senge RetroArch.
Iyo Steam Deck iri inotakurika PC, anodaro Valve
Dambudziko reLinux nemitambo rakajeka, uye zvimwe kana tisingade kudhonza WINE. MuSteam pachayo, dzinenge dzese dzinowanikwa paWindows, pane zvishoma zveMacOS uye zvakati wandei kuLinux, saka koni yacho inenge iri shoma (ini handina chokwadi nezve yekupedzisira). Uye pano tiri kutaura nezvemitambo, kwete nezvekushanda pane inokurumidza uye yakagadzika sisitimu yekushandisa. Naizvozvo, kutarisa kubvunza paMicrosoft system hakuite senge chivi chakakomba.
Pfungwa yacho ingave seinotevera: gadza windows pane iyo Steam Deck uye inoshandiswa iyo imwechete Steam iyo inogona kutoshandiswa kare nekukasira, asi zvakare nemitambo yeXbox iyo Microsoft inovimbisa kuti ichaunza kuPC futi. Pamusoro pezvo, mamwe emulators anogona kuiswa, kunyangwe ini ndinga simbise kuti madhiraivhu anoshanda zviri nyore uye handidi kukurudzira kuve "wekutanga kutora" mune izvi.
Ngatizvisiyei neStamOS, Windows kana chero imwe sisitimu yekushandisa, iyo Steam Deck iri laptop, uye ipapo mubvunzo wemutengo uyo server yaive nezuro unotsanangurwa. Saka, kana iwe uri mutambi, ndinofunga iwe unofarira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Steam Deck yakafanana nePC uye Windows inogona kuiswa kuti ive Xbox inotakurika
GNOME 40 inosvika kuUbuntu 21.10 Mazuva ese Kuvaka, uye Canonical inochengeta dhoko kuruboshwe
Steam Deck: Valve Inosheedzera Handheld PC Gaming Console ye € 419